Ahoana ny fomba famoronana fampisehoana manintona kokoa amin'ny Canva | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Tutorials, maro
Rehefa mampiseho asa any am-pianarana na rehefa mila manolotra tetikasa amin'ny sehatra matihanina ianao manana fanohanana hita maso, miaraka amina bika famolavolana, azonao atao ny manintona ireo hafatra ampitanao ary, noho izany, hanana sanda bebe kokoa ny asanao.
Na izany aza, ary tsy zava-miafina izany, indraindray isika dia voasambotra ara-potoana loatra ka manao ny zava-drehetra amin'ny minitra farany ary tsy mijanona hanao slide mety izay afaka manampy antsika hisarika ny sain'ny mpandray antsika.
Misy fitaovana tena tsara hampiala antsika amin'ity karazana olana ity. Matetika aho mampiasa Canva, ity fampiharana ity, azo jerena amin'ny Internet tsy misintona, dia rindrambaiko famolavolana notsorina hahafahanao mamorona fampisehoana, infografika, afisy ary singa hafa ao anatin'ny fotoana fohy sy amin'ny fomba tena tsotra, amin'ny alàlan'ny modely.
Ao amin'ny paositra anio dia hampianariko ianao hamorona fampisehoana mahafinaritra kokoa ho an'ny asanao Canva ary omeko torohevitra vitsivitsy ianao mba hitrandrahana tsara ity fampiharana ity. Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity ary manaova veloma an'ireo sary mihetsika mankaleo!
1 Misafidiana modely mety amin'ny asanao
2 Manampia slide izay manampy amin'ny fanisana ny atiny
3 Araraoty ny loharanon-karena Canva
4 Canva dia ahafahan'ny fiaraha-miasa ekipa
5 Ahoana ny fomba hitsitsiana asa
6 Torohevitra hamoronana fampisehoana tsara
6.1 Mifampiresaka ny zava-drehetra ary raha tsy mifampiresaka tsara kokoa dia aza apetraka
6.2 Raha mameno ny slide-nao amin'ny lahatsoratra ianao, dia hampifantoka ireo mpandray anao
6.3 Sivana, mpiray dina hampifanaraka ny sary
6.4 Tadiavo ny mizana
6.5 Ataovy mazava ny momba anao, fa tsy alentika ny tena antony manosika ilay slide
Misafidiana modely mety amin'ny asanao
Manolotra i Canva Modely tsy misy farany ary ny endriny dia vita tsara. Miaraka amin'ny habaka nozaraina tanteraka sy ny loko mirindra. Noho izany, raha te hanararaotra ny mety hisian'ity rindrambaiko ity, ny idealy dia ny misafidy modely mifanaraka amin'ny filan'ny asanao, mba hanovana ny fanovana farany ambany indrindra. Azonao atao koa ny manivana amin'ny loko, hahitanao hoe inona ny volavola mifanaraka amin'ny mombamomba anao.
Afaka manova ny modely eo noho eo hatrany ianao hanamboarana azy ireoAzonao atao koa ny manova ny loko famolavolana miorina amin'ny paleta hafa. Tena ilaina izany raha marika na vokatrao no asehonao ary mila ampifanarahinao amin'ny lokon'ny maha-izy azy ny orinasa.
Manampia slide izay manampy amin'ny fanisana ny atiny
Rehefa misafidy modely iray ianao Ao amin'ny tabilao "môdely" Canva dia mampiseho ny fisehon'ny slide hafa misy izany ho an'ny maodely nofidinao. Ankehitriny dia raharaha ny fandinihana ireo safidy ireo ary ny fahitana ny karazana slide manampy anao hanisa bebe kokoa ny atiny.
Ny iray amin'ireo olana mahazatra indrindra ataontsika rehefa manao fampisehoana dia ny fametrahana lahatsoratra be loatra. Amin'ny fananana modely misy toerana voafetra, terena ihany koa isika hisafidy izay vaovao ilaina ary hirona hamintina tsara kokoa isika.
Araraoty ny loharanon-karena Canva
Manolotra i Canva loharanom-pahalalana marobe maimaimpoana, manomboka amin'ny sary ka hatramin'ny sary ankapobeny, ary koa ny horonan-tsary. Ianao dia afaka araraoty ireo loharano ireo amin'ny volavolanao ary atambaro amin'ny sary, logo na singa amin'ny zavatra noforoninao manokana izy ireo. Raha te hiditra amin'ny loharano Canva dia mila tsindrio fotsiny ny kiheba singa. Raha te hampakatra ny loharanonao manokana ianao dia tsindrio ny kiheba "Fisie nakarina" ary amin'ny fanintomana fotsiny ny zavatra tianao hampiasaina na hidiranao amin'ny solosainao dia azonao atao ny mampakatra ny atiny sy ny singa tadiavinao mankany amin'ny rahona Canva.
Canva dia ahafahan'ny fiaraha-miasa ekipa
Raha miasa amin'ny ekipa ianao, Canva koa dia fitaovana mety ho tena ilaina rehefa mandamina asa fiaraha-miasa. Amin'ny fomba tena tsotra azonao atao omeo ny hafa ny fidirana amin'ny fampisehoanao ary avelao izy ireo hanova.
Mba hanaovana azy dia mila manao fotsiny ianao tsindrio ny bokotra «Share»eo an-tampon'ny efijery ary ampidiro ny adiresy mailaka an'ny olona tianao hiaraha-miasa. Afaka miditra izy ireo ary afaka miasa miaraka sy avy amin'ny toerana samy hafa tanteraka ianao.
Ahoana ny fomba hitsitsiana asa
Canva mitsitsy avy hatrany izay rehetra ataonao eo amin'ny mombamomba anao, ka tsy hiasa saina ianao sao ho very ny fampisehoana. Mijanona ao anaty rahona izy io ary, na aiza na aiza, amin'ny alàlan'ny fampidirana ny anaranao dia afaka miditra amin'ny volonao rehetra ianao.
Na izany aza, raha te hanana ilay fampisehoana amin'ny solosainao ianao, na satria manome anao filaminana bebe kokoa izany na satria mila mandefa azy ianao, Canva mitahiry amin'ireto endrika manaraka ireto: PNG, JPEG, PDF mahazatra, PDF ho an'ny fanontana, horonan-tsary GIF, MP4. Ataovy ao an-tsaina fa raha manana endrika GIF, horonan-tsary na sary mihetsika ny endrika amam-bikao, raha tahirinao amin'ny PDF io dia ho very ny hetsika. Avereno jerena ny volavolanao ary safidio ny endrika mety aminao indrindra.
Torohevitra hamoronana fampisehoana tsara
Mba hahafahanao mametaka ny fahafaha-manao an'ity fitaovana tsy mampino ity, raiso ity torolalana kely ity izay hatolotro anao hamorona fampisehoana famoronana izay manintona ireo mpandray anao.
Mifampiresaka ny zava-drehetra ary raha tsy mifampiresaka tsara kokoa dia aza apetraka
Ny singa rehetra ampidirinao amin'ny slide dia tokony hampita hafatra. Raha mampiditra haingon-trano haingon-tarehy fotsiny ianao dia tsy maintsy mitandrina ary manaova fepetra vitsivitsy satria azonao afangaro ny mpandray anao ary mety tsy hanana hery ny hafatrao.
Raha ny marina, raha miara-miasa amin'i Canva ianao, Manoro hevitra anao aho mba hiezaka ny tsy hampiasa sary sy sary haingon-trano ary mametra ny tenanao manampy ireo loharano ireo rehefa misy zavatra mifandraika amin'ny fampahalalana omenao. Ireo modely ao Canva dia efa voaravaka ampy, ka tsy dia mila zavatra betsaka kokoa izy ireo.
Raha mameno ny slide-nao amin'ny lahatsoratra ianao, dia hampifantoka ireo mpandray anao
Araka ny efa nolazaiko teo dia iray amin'ireo lesoka mahazatra indrindra io. Rehefa mamorona slide isika, indraindray dia be ny zavatra holazaina amintsika ka manomboka manoratra sy mameno pejy iray manontolo amin'ny fanazavana isika. Tsy ilaina izany ary, ankoatr'izay, mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny famelabelaranao izany.
Rehefa mpandray dia mahita sary mihetsika feno lahatsoratra, ny atidohantsika dia mirona hiala. Nieritreritra mivantana izahay hoe: "Inona ny ravin-taratasy avelan'izy ireo handeha" ary nihaino ny fampisehoana izahay niaraka tamin'ny fiheverana mialoha fa ho mavesatra sy mahery vaika izany.
Mba hisorohana an'izany, andramo ovaina ny lahatsoratrao ho lasa hevi-dehibe ary ampifandraiso amin'ireo sary sy sary ireo hevi-dehibe momba ny fanazavana izany dia maneho ny zavatra holazainao. Ny fifandraisana amin'ny sary dia mety ho mahery vaika ary amin'ny tranga maro, ny sary famantarana, ny sary na ny sary dia afaka miresaka mihoatra ny fehezanteny iray. Tsy vitan'ny hoe hanampy ny mpandray anao hanaraka tsara kokoa ny tantara izany, fa ho script ho anao raha miresaka.
Sivana, mpiray dina hampifanaraka ny sary
Raha mampiasa sary avy amin'ny banky sary ianao, ary na ny sary atolotry Canva anao aza, dia mety ho hafa tanteraka ny fitsaboana azy ireo. Tetika iray izay tena ilaina amiko mba hanomezana fitohizana sy firindrana ny famolavolana ny famelabelarako dia ny fametrahana sivana mitovy amin'ny sary rehetra. Matetika aho no milalao mainty sy fotsy matetika.
maso! Tsy mandeha foana izany, mila manandrana sivana mety tsara amin'ny sary rehetra ianao ary hisy asa izay tsy hahafahanao manao azy satria mila asehonao ny sary misy azy.
Tadiavo ny mizana
Tsy azo ihodivirana fa, rehefa manangana fampirantiana dia misy teboka izay be lavitra noho ny hafa. Na izany aza, tokony hiezaka ny handanjalanja ny lanjan'ny slide-nao ianao ary tsy hanana entana be loatra ary ny hafa kosa poakaty.
Raha lava be ny teboka iray dia zarao ho roa. Hanampy ireo mpandray anao hanaraka anao ihany koa izany, rehefa manova ny slide ianao dia manintona ny sain'izy ireo ary raha misy very very dia afaka mandray anjara indray.
Ataovy mazava ny momba anao, fa tsy alentika ny tena antony manosika ilay slide
Raha anisan'ny orinasa ianao na raha manandrana mivarotra ny tetikasanao manokana miaraka amin'ilay fampisehoana dia mila ataonao mazava tsara ny momba anao. Ampidiro ny sary famantaranao Ary raha mamela izany ny atiny dia afaka mamolavola mifototra amin'ny lokon'ny orinasanao na ny marika manokana ianao.
Na izany aza, raha toa ka efa manana ny mombamomba azy ilay ezahinao hivarotra ary ny maha-orinasa anao dia tena lavitra ny nolazainao dia tsara kokoa ny mandeha any aoriana, mba tsy hamaivanina ny hafatra. Ampidiro ny sary famantarana anao, amin'ny maha sonia anao, amin'ny toerana izay tsy mangalatra loatra ny saina ary manome laharam-pahamehana ny antony lehibe hanaovana ilay fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba famoronana fampisehoana manintona kokoa miaraka amin'i Canva